Ikhaya Elikude Nekhaya - I-Airbnb
Ikhaya Elikude Nekhaya
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguMarcy
UMarcy ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Uya kuba nendawo eninzi kuwe, kunye nesifundo sakho, ibhafu, kunye negumbi lokulala elinebhedi enkulukazi kodwa wamkelekile ukuba wabelane ngegumbi lokuhlamba impahla, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala. Ngeentsuku ezifudumeleyo, uya kuthanda ukuphunga iglasi yewayini okanye ibhiya ebandayo kwiveranda ekhuselweyo ejonge ngasemva kweyadi enkulu, ebiyelweyo (ilungele izinja eziziphethe kakuhle!). Ukuhlala izinja emini ngelixa ungekho nako kuyaxoxiswana.
Ikhofi ilungile xa uvuka ekuseni kwaye i-cookie jar ihlala igcwele. Ndiyakuthanda ukubhaka nokupheka, kwaye ngexesha lokuhlala kwakho ungathethathethana ngokutya okulula ngentlawulo eyongezelelweyo.
Ikhaya libekwe kwindawo ethe cwaka, iibhloko ezi-2 ukusuka kwipaki yesixeko kunye neziko lokuzonwabisa loluntu. Indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato iyafumaneka. Ukuqhuba okufutshane okanye ukuhamba ngemizuzu engamashumi amathathu kwindlela esecaleni komthi kukuthatha ukuya kwindawo ephakathi kwedolophu eneendawo zokutyela ezinkulu kunye notywala, kunye neTheatre yeSunflower, indawo yasekuhlaleni exhasa ubugcisa. Kubasebenzi bezempilo abafuna indawo yekhaya ngelixa bejikeleza ikliniki okanye ikhontrakthi kwindawo, iSibhedlele seSikhumbuzo saseMazantsi-ntshona kukuhamba nje okufutshane ukusuka ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Marcy
Ndiyi psychotherapist esele ithathe umhlala-phantsi kwaye ndingumama entliziyweni. Ndikonwabele ukusingatha abafundi bezempilo besenza ujikelezo lweklinikhi kule ndawo kule minyaka mibini idlulileyo kwaye ndonwabele ukwamkela iindwendwe ukuba zabelane ngekhaya lam! Ndiyabathanda abantu kwaye ndiweva amabali abo. Ikhaya lam belisoloko liyindawo apho abantu badibana khona emva kweehambo zabo zokuncokola nokuhleka nokukhuthazwa.
Ndiyi psychotherapist esele ithathe umhlala-phantsi kwaye ndingumama entliziyweni. Ndikonwabele ukusingatha abafundi bezempilo besenza ujikelezo lweklinikhi kule ndawo kule minyaka…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cortez